Sidee loo aamusiyaa WhatsApp wicitaanada aaladaha Android | Androidsis
Sida loo aamusiiyo WhatsApp wuxuu ugu yeeraa aaladaha Android
Inbadan ayaa ah ikhtiyaarrada qaabeynta ee barnaamijka WhatsApp uu leeyahay, hadda fariimaha ay adeegsadaan inta badan isticmaaleyaasha adduunka. Qalabka ku jira qaabeynta gudaha wuxuu u oggolaanayaa qof walba inuu u qaabeeyo sida uu jecel yahay iyadoo ku xiran hadba baahida mid kasta.
Haddii aad ka mid tahay dadka adeegsada WhatsApp-ka si ay u diraan una helaan farriimo Waad duubmi kartaa arjiga si aanad uga helin wicitaanada mid kamid ah dadka aad la xiriirto Tani waxay ka fogaan doontaa dhageysiga wicitaannada la maqli karo markii ay kuugu yeeraan maqal ama muuqaal, adiga ayay kugu xiran tahay inaad qaadato wicitaanka ama maahan haddii ay tahay qof muhiim ah.
Waxaa jira waxyaabo badan oo horumar ah oo ku saabsan WhatsApp, mid ka mid ah ayaa ah inuu awood u leeyahay inuu ka saaro dhawaaqa wicitaanadaas aan munaasibka ahayn maxaa yeelay waxay ku qabataa adiga oo shaqeynaya ama wax muhiim ah qabanaya maalinkasta. Laga bilaabo rabitaanka aamusnaanta waxay raacaysaa iyada oo la raacayo qodobba qodob oo ha uga tagin wax firfircoon si aysan u jirin wax dhawaaq ah markay kuu soo diraan wicitaan.
Ka sakow aamusinta wicitaanada WhatsApp ee ku saabsan Android, waad dib u howlgelin kartaa hadaad rabto inaad dib u dajisoAdiga ayay ku xiran tahay adiga inaad sameyso ama aadan sameyn, laakiin tan ayaa lagugula talinayaa haddii ay badanaa kuugu yeeraan maalin kasta dalabka. Waxay u egtahay wicitaan, taasi waa sababta aan ugu qasban nahay inaan u isticmaalno ogeysiisyada gudaha ah.
Si aad hawsha u fuliso, samee waxyaabaha soo socda:
Ku fur barnaamijka WhatsApp taleefankaaga Android
Dhagsii saddexda dhibic ee taagan si aad uhesho goobaha kala duwan
Hadda guji Settings si aad u muujiso dhammaan xulashooyinka
Tag Ogaysiisyada oo raadi "Wicitaanada", waxay ku tusi doontaa kii ugu dambeeyay, isla marka la helo Ogeysiisyada mudnaanta sare leh
Hada Tone / Ringtone geli «Midna», tan dooro Mawduucyada iyo tan hore, dooro ikhtiyaarkan
"Vibration" guji "Off" oo kama gariiri doono haddii wicitaanno dhaco
Tan waxaad ka heleysaa inaadan helin digniino illaa inta codadka laga hadlayo haddii ay doonayaan inay soo wacaan, sidoo kale iska ilaali gariirka sida haddii ay ahaan lahayd wicitaan taleefan oo caadi ah. WhatsApp, sida barnaamijyada kale, wuxuu leeyahay qaabeyn gudaha ah oo dhameystiran waana lagu habeyn karaa qofka.
Si aad dib ugu hawlgeliso waa inaad raacdaa isla talaabooyinka, ee Tone / Ringtone Xulo midka aad rabto inaad ka dhawaajiso markay kuu yeeraan, gariirka ayaa dooranaya On waana intaas. Waxaas oo dhan waxay kaa dhigayaan inaad yeelato dhawaaqyo maqal iyo muuqaal ah oo aad rabto qof kula hadla.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo aamusiiyo WhatsApp wuxuu ugu yeeraa aaladaha Android
OnePlus 8T wuxuu helaa cusbooneysiin cusub oo OxygenOS 11 leh horumarin weyn
Vivo X60 iyo Vivo X60 Pro, labada taleefan cusub ee leh Exynos 1080, Android 11 iyo shaashadda AMOLED